Mpinamana firy no ilainao amin'ny fiainanao? - Fifandraisana
Firy ny tena sakaiza ananan'ny olon-tsotra amin'ny androm-piainany?
Firy no ilainao amin'ny fotoana rehetra mba hahasambatra?
Tsy misy valiny mivantana amin'ireo fanontaniana ireo.
Angamba efa naheno ianao fa 150 (isany Dunbar izay horesahintsika ato ho ato), na vola hafa…
… Saingy tsy valiny mahafa-po tanteraka izany.
Ny marina dia: ny isan'ny namana ilainao dieny izao ary mandritra ny androm-piainanao dia ny isan'ny namana AOKO anao.
Inona no 'ampy' ho anao mety ho vitsy loatra na be loatra amin'ny olon-kafa.
Ary io isa ‘ampy’ io dia mety hiova arakaraka ny vanim-potoana iainanao.
Raha manahy ianao fa tsy manana namana betsaka araka ny tokony ho izy dia anontanio ny tenanao raha tena ahiahy marina mifototra amin'izany fahatsapana ho irery na satria mino ianao - na efa nolazaina taminao - fa mila bebe kokoa ianao.
Afaka miaina fiainana sambatra sy milamina ny olona amin'ny faribolana anatiny kely dia kely.
Ary afaka miaina fiainana tsy sambatra ny olona na eo aza ny faribolana lehibe dia lehibe.
Ka andao isika handinika lalina kokoa mba hahitana hoe firy ny namana no isa mety aminao.
Taorian'ny fandalinana ny haben'ny ati-dohan'olombelona tamin'ny taona 1990 dia nanatsoaka hevitra ny manam-pahaizana Dr. Robin Dunbar fa misy fetran'ny isan'ny olona ahafahantsika mitazona fifandraisana ara-tsosialy misy dikany.
Io isa io dia 148, na dia boribory matetika hatramin'ny 150 intsony aza.
Ny teny fototra eto dia misy heviny.
Mety ho fantatrao ny anarana sy ny endrik'olona maro hafa noho io, fa tsy azo inoana fa hifandray amin'ny tena izy ireo ianao.
Saingy nanomboka nandinika lavitra kokoa i Dunbar fa misy fiantraikany amin'ny fomba fanasokajiana ireo fifandraisana 150 ireo ny fahakaikezana ara-pihetseham-po.
Manome sosokevitra izy fa mety tsy hanana olona mihoatra ny 5 amin'ny sosona ambony mitsikera anao - ny fahamasinanao ao anaty.
Miankina amin'ny toerana misy anao amin'ny fiainanao, io sosona io dia mety ho an'ny ray aman-dreny, mpiray tampo, mpiara-miasa na namana akaiky indrindra.
Mety hanana fifandraisana 10 akaiky kokoa ianao amin'izay hitanao matetika sy izay itiavanao azy. Mety ho ireo namana tsara na olona ao amin'ny fianakaviana.
Ny sosona manaraka dia misy olona 35 fanampiny izay matetika ifaneraseranao ary heverinao ny manasa amin'ny fotoana manokana toy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao.
Avy eo misy olona 100 fantatrao tsara, fa mety tsy dia hitanao loatra.
Dunbar sy ny mpiara-miasa aminy dia nanadihady ny fahamarinan'ireto isa ireto amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany ary toa miavosa izy ireo amin'ny salanisa.
inona no tiako be?
Fa ity ny fetran'ny Nomera Dunbar: inona ny tombana isa antonony rehefa manontany namana firy ilainy ny olona toa anao?
Ka misy sanda ve ao amin'ireo sosona ireo?
Ny tena zava-dehibe dia ireo sosona roa voalohany ireo: ny fitoerana masina anatiny sy ireo namanao akaiky.
Ireo olona 15 ireo dia hanome anao ny harena ara-pihetseham-po izay tena ilainao amin'ny fiainana.
Amin'ireo fotoana samihafa sy amin'ny toe-javatra samihafa, ireo olona ireo dia hitondra anao ny fahatsapana fifandraisana lehibe indrindra sy ny fahafaha-manao fahasambarana lehibe indrindra.
Ireto no olona hitodihanao fanampiana sy fampiononana rehefa ilainao izany.
Izy ireo no tena misy dikany aminao.
Saingy eo am-pikarohana izao izahay, ity isa ity dia mety mihoatra ny ilain'ny olona sasany ary vitsy noho ny sasany maniry.
Ny olana momba ny toetranao
Ny olona sasany dia milamina sy milamina.
Ny sasany mivelatra eo afovoan'ny korontana.
Ny olona sasany dia afa-po mipetraka fotsiny.
Ny sasany kosa mila manao zavatra tsy tapaka.
Ny olona sasany dia tia iray amin'ny fotoana iray miaraka amin'ireo akaiky azy ireo.
Ny sasany kosa aleony mampiaraka ny rehetra ao anaty fivoriana lehibe iray.
Na dia fanamafisana loatra aza izany, dia mety hampiavaka azy ireo isika introverts ary ny extroverts.
Ary ny isan'ny fifandraisana ilain'ireto karazana toetra roa ireto dia samy manana ny endrik'izy ireo eo amin'ny Dunbar Layers.
Ireo introverts dia mety ho faly tanteraka amin'ny olona iray na roa eo an-tampony, sosona lehibe indrindra.
Mety ho dimy na enina ny mpitsikilo.
Ary isaky ny sosona manaraka, ny introverts dia mety ho afa-po amin'ny namana vitsy noho ny soso-kevitr'i Dunbar, fa ny extroverts kosa mety hanitatra ireo fetra ireo.
Amin'ny sehatra midadasika kokoa, izay ahitan'i Dunbar olona manodidina ny 100 eo ho eo, dia mety miankina amin'ny zavatra fialam-boly na filan'ny olona iray izany.
Ny introvert stereotypical anao dia mety aleony mandany ny fotoanany amin'ny famakiana na amin'ny fanaovana zaridaina, ohatra, na dia ny extroverts aza dia mety ho ampahany amin'ny ekipa fanatanjahantena izay mitondra fifandraisana marobe.
Toy izany koa, ny safidin'ny kariera amin'ny karazana toetrany samy hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny haben'ny haben'ny faribolany.
Ny extrovert dia mety hitady toerana misy eo amin'ny ekipa lehibe iray, angamba amin'ny varotra na marketing izay andaniany fotoana betsaka hifaneraserana amin'ireo mpiara-miasa sy mpanjifa.
Ireo introverts dia mety misafidy ny hiasa amin'ny maha-mpiantoka asa mahaleo tena azy, hahafantatra ny mpanjifany, eny, saingy mifanerasera amin'ny olona vitsy kokoa amin'ny ankapobeny.
Na introvert ianao na extrovert dia tsy ny toetra amam-panahy mety hitranga raha toa ka halalaka ny faritry ny fiaraha-monina misy anao.
misokatra-tsaina , charisma, fiaraha-miory, fahamendrehana… ireto dia toetra vitsivitsy monja izay hisy fiantraikany amin'ny isan'ny olona manintona anao amin'ny fiainanao.
na dia ny fomba firesakao momba ny tenanao ary ny fahaizanao tohizo ny resaka dia handray anjara amin'ny firy amin'ny olona hiafara amin'ny tsirairay amin'ireo sosona samihafa amin'ny maha-akaiky ny fihetsem-po.
Fomba 10 hahatonga ny namanao ho akaiky kokoa noho ny taloha
Tsy manana namana aho… Inona no azoko atao mba hahitako ny sasany?
'Fa maninona no tsy tian'ny olona aho?' - Antony 9 ny olona tsy te-ho sakaizanao
Aiza ianao eo amin'ny fiainanao?
Firy ny namana ilainao na tadiavinao amin'ny fiainanao no hiova arakaraka ny dingana iainanao.
Ny zaza mbola kely dia manana reniny, dadany ary angamba anadahy na rahavavy ao anaty faribolana anatiny.
Na dia manana faribolana bebe kokoa aza izy ireo ho an'ny fianakaviany bebe kokoa sy ny zanany hafa any amin'ny akanin-jaza, dia kely ireo ary ny haavon'ny fahatsapana ho akaiky dia kely noho ny an'ny olon-dehibe.
Rehefa mihalehibe ireo ankizy dia mety misy namana akaiky azy ireo ny faribony ao anatiny, ary mihalehibe kosa ny sosona hafa rehefa mihaona amin'ny olona mihaona amin'ny alalàn'ny fianarana sy fialamboly izy ireo.
Ny sosona faharoa misy ny olona 10 dia mety hiova matetika ary manome lanja bebe kokoa an'ireo olona ireo izy ireo noho ny tamin'ny fahatanorany.
Ny fahatanorana dia angamba rehefa manana faribolana ara-tsosialy lehibe indrindra amin'ny androm-piainantsika isika (farafaharatsiny, amin'ny teny misy dikany).
Ny namana taloha na ny oniversite dia mety mbola ho ampahany lehibe amin'ny fiainana, raha ny mpiara-miasa kosa miditra amin'ny antoko rehefa miditra amin'ny tontolon'ny asa ianao.
Avy eo dia manomboka ny dingana miadana amin'ny fanetezana ny fiaraha-monina.
Rehefa mihena ny fotoana malalaka anananao dia mihaosa ny fifandraisana misy ary ireo olona ireo dia mety hifindra amin'ny Dunbar Layer iray mankany amin'ny iray ambany.
Angamba mifantoka amin'ny asanao ianao.
Angamba ianao milamina amin'ny a fifandraisana manolo-tena ary manomboka fianakaviana mihitsy aza.
tononkalo ho an'ny olon-tiana nodimandry
Mety hahita fifandraisana akaiky amin'ny ray aman-dreninao izay nihaosa nandritra ny fahatanoranao sy ny fahatanoranao ianao.
Manalavitra anao amin'ny namana ianao, mifindra ny olona, ​​mitranga ny fiainana.
Matetika, amin'ny fotoana ahatongavanao amin'ny taona antenantenanao dia afaka mihena ny isan'ny olona ao amin'ny Dunbar Layers anao ambany.
Vitsy ny namanao akaiky, vitsy ny namana tsara ary vitsy ny olom-pantatrao.
Ary amin'ny fotoana ahatongavanao amin'ny fahanteranao dia misy vintana matanjaka fa hiala amin'ny namana maro ianao nandritra ny taona maro.
Na eo aza izany, na eo aza ny isan'ny namanay mihena arakaraka ny taonantsika, ny zokiolona dia sambatra kokoa noho ny namany tanora kokoa.
Araka ny ity resaka TED ity manazava:
Rehefa mihantitra isika […] Mampiasa vola amin'ny ampahany manan-danja kokoa amin'ny fiainana isika, ary mihatsara ny fiainana, noho izany dia sambatra kokoa isika isan'andro.
Na dia tsy voalaza manokana aza io resaka TED io, ny fehin-kevitra iray azonao raisina dia ny hoe rehefa mihalehibe isika dia manambola bebe kokoa amin'ny fifandraisana izay manan-danja amintsika.
Inona moa no mety ho zava-dehibe kokoa noho ny olona tiantsika sy karakaraintsika?
Miverina any amin'ireto sombin-tsolika roa ambony Dunbar ireto izahay.
Ireo vondron'olona ireo, izay olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika fony mbola zaza isika, dia nitombo ny lanjany.
Ny lesona ho an'ny sisa amintsika dia ny tokony hijerentsika bebe kokoa ny isan'ny fifandraisana akaiky akaiky noho ny isan'ny lehibe kokoa amin'ny fifandraisana tsy mahazatra.
Ny fiovana mitohy amin'ny namana
Araka ny efa nomarihinay, ny olona tena izy ao amin'ny tsirairay amin'ireo fisakaizanao dia mety hiova rehefa mandeha ny fotoana.
Na ny makiazy ao amin'ny fitoerana masina ao anatiny aza dia afaka miova, indrindra rehefa mihantitra sy mamoy ny taranaka teo alohantsika isika.
Ary arakaraky ny handehananao mankamin'ny sosona no hahitanao ny fiovana mety ho hitanao.
Io dia miverina amin'ny dingana manao ahoana amin'ny fiainanao ary inona ny toe-javatra misy anao.
Angamba ianao manalavitra lavitra an'ireo namanao ankehitriny. Izany dia manalefaka ny fifandraisana sasany na manery anao hanao vaovao aza.
Ireto namana vaovao ireto dia mety hanomboka amin'ny endrika akaiky kokoa ny maha-akaiky anao ary hiakatra rehefa mihalehibe eo amin'ny fiainanao izy ireo.
Na mety manan-janaka ianao ary manamboatra fifandraisana vaovao amin'ny renim-pianakaviana hafa.
Noho ny fifamatorana ifandraisanao amin'ny zanakao sy ny fotoana mety andanianao miaraka dia mety ho lasa ivon-toerana lehibe eo amin'ny fiainanao ireo olona ireo.
Ny asa vaovao dia midika hoe sakaizanao vaovao ary, matetika, ny fanovana ireo avy amin'ny mpampiasa anao teo aloha ka hatrany amin'ny sosona ambany.
Ka, hitanao, misy fiovana tsy tapaka eo amin'ny filan'ny finamanana.
Ny vokatry ny media sosialy
Ny tontolon'ny nomerika dia nanova ny fomba hanombohantsika mamaritra ny namana.
Manomboka amin'ny Twitter ka hatramin'ny Facebook ka hatramin'ny Instagram ary amin'izay ho avy dia manangona 'namana' vaovao na 'mpanaraka' vaovao amin'ny sehatra indostrialy izahay.
Miteraka olana roa momba ny namana heverintsika fa tokony hananana isika:
1. Hitantsika hoe firy ny sakaizan'ny olon-kafa. Raha vitsy ny sakaizantsika, dia mety hahatonga antsika tsy ho tian'ny olona izany.
2. Izahay dia mijery ny isan'ny namantsika sy ny isan'ny olona tena andaniantsika fotoana manan-danja ary manahy izahay fa misy olona manaiky ny fisakaizantsika amin'ny tontolo nomerika, fa tsy te ho namanay amin'ny tontolo tena izy. .
Ny media sosialy dia mamitaka ny saintsika amin'ny finoana fa akaiky kokoa ireo olona ireo isika noho ny tena izy.
Hitanay ny fanavaozam-baovao sy ny sarin'izy ireo ary manome antsika varavarankely amin'ny fiainany ireo.
Mihevitra izahay fa mahalala azy ireo.
Saingy tsy manao izany izahay. Tsy dia izany loatra.
Maro amin'ireo olona ifandraisantsika amin'ny media sosialy no anarana sy tarehy fotsiny amintsika.
Mety tsy ho mihoatra an'izay izy ireo, mazava ho azy. Saingy mety izy ireo koa no nibodo ny iray amin'ireo zava-dehibe kokoa amin'ny fisakaizantsika.
Ny tsy maintsy tadidintsika dia ny fahazoantsika ny ankamaroan'ny fiadanantsika ara-pientanam-po eo amin'ny vondrona kely eo an-tampon'ny piramidan'ny namana.
Ary ny ankamaroan'ny namantsika virtoaly dia lavitra tokoa amin'ny lafiny maha-akaiky azy ara-pihetseham-po, hany ka tsy azo heverina ho namana mihitsy izy ireo.
Ka tsy tokony avelantsika hirenireny lavitra loatra ny fifantohantsika ary hino fa ireo olona ireo dia afaka manome karazana fifandraisana olombelona irintsika mafy.
Miverina amin'ny fahatsaram-panahy
Amin'ity lahatsoratra ity dia niady hevitra izahay fa ny laharan'i Dunbar amin'ny salan'isa dia kely lanja ho an'ilay olona.
Ny toerana nifanarahanay tamin'i Dunbar dia amin'ny fiheverana fa ny olona amin'ny fiainantsika dia samy manana ny lanjany.
Ireo sosona ireo dia mifototra amin'ny fanakaikezana ara-pientanam-po: ny fifandraisantsika amin'ny olona iray amin'ny sehatra ara-pientanam-po.
Ary izany dia mamerina antsika amin'ny fanambarantsika tany am-boalohany momba ny isan'ny namana marina dia ny isa izay tsapanao fa afa-po.
inona no nitranga tamin'i bray wyatt
Mila namana betsaka araka izay ilaina ianao mba hamenoana ny filanao ara-pientanam-po.
Ho an'ny sasany, midika izany fa olona manan-danja vitsivitsy sy fanelezana namana tsara.
Ny sasany mety mahita fa mila namana betsaka kokoa hanome izay ilainy ara-pihetseham-po isan-karazany.
Ny ampahany amin'izany dia hidina amin'ny fahatsapanao ny olona akaiky anao.
Raha tena mpinamana be indrindra ianao sy ny olon-tianao dia azonao atao ny mifampiresaka amin'izy ireo ary manome anao ny fitiavana tadiavinao fa ilainao izy ireo, mety hanova olona sasany hiala ireo sosona ambony anao ho ambany ianao.
Izany no mahatonga ny olona sasany ‘hanjavona’ rehefa manao firaisana. Mahazo zavatra betsaka amin'ny filàn'izy ireo ara-pihetseham-po izy ireo ka tsy dia miankina amin'ny namany na fianakaviany intsony izy ireo hahatratra ireo filàna ireo.
Fa raha, na eo aza ny fitiavanao azy ireo mafy, ianao sy ny olon-tianao tsy dia akaiky ara-pientanam-po araka ny itiavanao azy, dia mety hikatsaka fifandraisana hafa ianao hanomezana izany filàna izany.
Ka, hamily ny hevitra mody farany fotsiny…
Tsy misy olona afaka milaza aminao hoe firy ny namana ilainao.
Tsy tokony hahatsapa ho voatery hanao namana marobe ianao.
Tokony hifantoka amin'ny famoronana fifandraisana marobe araka ny tokony ho izy isaky ny ambaratongam-pahatapitry ny fihetsem-po ianao mba hahatsapanao afa-po sy tanterahany.
Ny sosonao dia mety misy olona 2, 6, 15, ary 20.
Na mety ahitana olona 5, 12, 40, ary 110 izy ireo.
Samy marina ny roa, tsy diso koa, misolo tena ny olona samy hafa fotsiny izy ireo.
Tadiavo ny firafitry ny fisakaizana tsy manam-paharoa - ity no isan'ny namana ilainao.
Aza miahiahy amin'ny famenoana quota manokana.
ohatrinona ny vola ananan'i dr dre
ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fanambadianao
inona no holazaina amin'ny olona momba anao